वडामै विकास शिविरको आयोजना गरेपछि सेवाग्राहि खुशि । - Charnawati Post
वडामै विकास शिविरको आयोजना गरेपछि सेवाग्राहि खुशि ।
फिचर समाचार राजनीति समाचार स्थानीय समाचार
प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०७६, सोमबार १६:१७
दोलखा/दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले वडा मा नै पुगेर विकास शिविरको आयोजना गरेपछि सेवाग्राहि हर्षित भएका छन् ।
गाँउपालिकाले वडामा पुगेर योजना सम्झौता देखि प्राथमिक उपचार समेत गराउन सुरु गरेपछि आम नागरिकहरुले बल्ल स्थानीय सरकार घर घरमा पुगेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेको आभास गरिरहेका छन् । उनिहरुले यति बेला स्थानीय सरकार के हो ? नागरिकका हितका लागि स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन् ? यस्ता कुराको जानकारी भएकोप्रति समेत खुशि व्यक्त गरेका छन् ।
यस अघि सेवा पाउनको लागि घण्टौँ हिँडेर वा बलेरो रिर्जभ गरेर गाउँपालिका पुग्दा पैसासँगै समयको खर्च हुने गरेको तर अहिले यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर १ क्याम्पलका पुर्णबहादुर थामि । उहाँ भन्नुहुन्छ “पहिले गाउँपालिका पुग्दा टाढा हुनुका साथै सवारी नपाउने र धेरै रकम खर्च हुन्थ्यो । एउटा कागज नमिलेमा फेरी फर्किएर घर आउनुपर्ने र मिलाएर लानुपर्ने समस्या थियो अहिले शिविरको आयोजना गरेपछि धेरै कुरामा सेवाग्राहिलाई फाईदा भएको छ ” ।
शिविरको आयोजना गर्नुको उद्देश्य